Ny totozy - karazana home
Ny fifidianana biby fiompy dia sarotra, indrindra ho an'ny olona izay efa zatra loatra sy fomba fiainana. Ny saka hoditra, ny alika dia mila mandehandeha, ny mpangalatra dia manimba ny fanaka, ary ny vorona dia avo loatra. Raha toa ka tsy azo ekena avokoa ireo karazam-biby rehetra ireo, ny sokatra dia ho safidy tsara indrindra ho an'ny biby fiompy - ny karazam-borona ao an-toerana dia mora tsotra sy tsy misy dikany amin'ny resaka votoaty. Ankoatra izany, miaina lava be izy ireo, ary mifanohitra amin'ny fitsarana an-tendrony miely, karazam-borona mahafatifaty sy mahatsikaiky.
Karazana sokatra ho an'ny fampiasana an-trano
Misy karazam-bolo maherin'ny 300 mipetraka amin'ny masoandro, afaka miaina amin'ny fahababoana ary mahazo aina amin'ny olona iray. Miankina amin'ny toera-ponenana manokana izy ireo, mizara ho vondrona lehibe roa - sokatra landy sy rano . Na dia eo aza ny anarana, ny karazam-borona farany dia mila mandeha tsindraindray mankany amin'ny tany miaraka amin'ny masoandro mandoa, raha tsy izany dia mety ho marary noho ny tsy fisian'ny ultraviolet ny biby.
Inona no karazana sokatra izay mety tsara hisafidianana? Izany dia miankina amin'ny toetra sy ny endrik'ilay mpampiantrano ho avy. Ny valan-javaboahary no tena mifankatia sy tony, mifandray amin'ny olona iray. Ny karazana biby an-jazakely dia tena ampy, fa mahasarika kokoa, ny fahitana azy ireo ao amin'ny aquarium dia fahafinaretana.
Karazana karazana sokatra
Ao amin'ny magazay biby fiompy dia matetika mahafeno ireto biby miaina manaraka ireto izay tia ny tany:
1. Ny sokatra Azia afovoany (steppe):
Hery: faharetana sy tsy firaharahiana;
habaka: hatramin'ny 25 cm;
Sakafo: salady, clover, dandelion, plantain ary zavamaniry hafa, indraindray ianao dia afaka manala ny biby an-tsaha miaraka amin'ny legioma sy voankazo masaka;
Ny fepetra entina: ny terrarium, ny trano fonenana avo lenta (tsy latsaky ny 30 santimetatra) sy ny dobo filomanosana kely, dia ilaina ny mando, ny toerana ho an'ny fialokalofana, ny fahafahana mihady;
Ny androm-piainana: mihoatra ny 40 taona.
2. Ny sokatra Starfish (Indian):
Ny endri-javatra: tsara tarehy tsara tarehy misy loko mainty miaraka amin'ny kavina mavo amin'ny endrika kintana;
habaka: 25 santimetatra;
Sakafo: dandelion, alfalfa, salady ary zavamaniry hafa, legioma sy voankazo - carrot, apples, zucchini, pumpkin;
fepetra fisokafan'ny toeram-piasana;
Fiainana maharitra: hatramin'ny 80 taona.
Karazana sokatra an-trano
Ny safidin'ny horitaingina misidina dia somary lehibe kokoa, na dia malaza aza izy ireo. Ny zava-misy dia ho an'ny fikojakojana ireo biby fiompy ireo, ny rano fisotro madio dia ilaina amin'ny filtration tsy tapaka sy ny fanamafisana ny rano, ny tariby manokana, ny mari-panafana sy ny hainandro, ary ny fividianana ireo fitaovana ilaina dia "hisy fiantraikany amin'ny paosinao". Indrindra indrindra momba ny karazana sokatra an-dranomasina. Izy ireo dia mila mamorona toe-javatra izay mifanandrify indrindra amin'ny fonenana voajanahary. Noho izany, na dia ho an'ny biby mandady kely aza dia mila Aquarium lehibe manodidina ny 200-250 litatra.
Raha matanjaka ny faniriana hanana rano dia afaka mifidy amin'ireto manaraka ireto ianao:
1. Tortoise mena:
Ny endri-javatra: toerana kely mena matevina manakaiky ny valala;
habaka: tsy mihoatra ny 30 santimetatra;
Sakafo: trondro madinidinika, anisan'izany ny mofomamy, vatosokay sy kiropitra, indraindray ny sokatra dia tsy mieritreritra ny manatsara ny sakafo amin'ny zavamaniry sy zavamaniry;
Toeram-piofanana ho an'ny fikojakojana: Aquarium iray eo amin'ny 200 litatra miaraka amin'ny nosin'ny tany izay latsaky ny 25% ny faritra, miara-miara-miaina tanteraka ny sokatra;
Fiainana maharitra: 20-40 taona.
2. Trionika Shinoa:
Ny singa: ny fahamendrehana, ny fonon-triona dia tsy misy takelaka lava ary rakotra hoditra, mora simba;
habaka: hatramin'ny 40 cm;
Sakafo: trondro, kankana, ratsiratsy, sifotra, moustels, kalsa;
Toeram-piofanana ho an'ny fikojakojana: lakandrano lehibe (200-250 litatra farafahakeliny) miaraka amina moron-dranomasina kely na avaratra iray, aleon'ny trionika manirery.
Fiainam-piainana: 45 taona eo ho eo.
Tsara kokoa ny manana sokatra na tanora maromaro aorian'ny zaza vao teraka.
3. Sampana (Amerikana, Eoropeana):
Ny endri-tsoratra: karazana menaka oliva na mainty miaraka amin'ny tara-pahazavana be dia be;
habaka: hatramin'ny 35 cm;
Sakafo: sahona, trondro, shrimp, sifotra, crickets ary zavamananaina kely hafa, ary ny ronono sy ny fo, ny atiny;
Ny fikojakojana ny fikojakojana: Aqua-terrarium malalaka amin'ny 100 litatra, ny ampahatelony dia mipetraka amin'ny nosy mitomandavana;
Fiainana maharitra: 20 taona.
Cryptorchidism amin'ny saka
Ahoana no hanomezana sakafo ny pug?
Hills - sakafo amin'ny saka
Toby ao amin'ny akquarium ho an'ny trondro
Trondro akoram-piaramanidina am-pilaminana
Babesiosis amin'ny alika
Terrarium ho an'ny sokatra tany
Amin'iza no tokony hitanao alika?
Anarana amin'ny ankizivavy ankizivavy - fifantenana ireo safidy tsara indrindra ho an'ny anaram-bosotra
Lasa balerina ilay tovovavy nitondra tongolobe!
Ahoana no fomba handoko amin'ny eyeliner?
Raha naka sary ny vehivavy ny lehilahy: 30 otpad ny sary!
Hainan - isaky ny volana
Aretina amin'ny tongolo lay ary hiady amin'izy ireo
Ahoana ny fangatahana amin'ny niche?
19 fitsipika henjana izay tsy maintsy tanterahan'ny Filohan'ny Amerika sy ny fianakaviany
Epithelium ao amin'ny loto
Sakafo - Sakafo 8 tsara indrindra amin'ny sakafom-bozaka ho an'ny lasopy na mafana
Faharetan'ny vanim-potoana - inona io?
Ny Cake Chrysanthemum
Shannen Doherty dia niverina nijery horonantsary taorian'ny ady lava nandritra ny androm-piainany
Andrea Pejic: misy fampakaram-bady va?
Azalia Banks dia nanao fampisehoana lamaody miaraka amin'ny akanjo marevaka
Manikina maitso mavana
Mantras mba hisarihana vola